Mividy IP68 Waterproof Full Touch Screen & Bluetooth Call Sports Smartwatch ho an'ny lehilahy | WoopShop®
Vy vy bd
Hoditra mainty bd
hoditra volontany bd
Gun Silica / SinaSteel vy bd / SinaSilika Silver / SinaVolafotsy vy bd / SinaBd hoditra mainty / Sinavolontsôkôlà bd / Sina
Tonga haingana dia haingana ny famantaranandro, tao anatin'ny 20 andro. Jereo tsara, matanjaka, ho an'ny lehilahy fotsiny. Miasa daholo ny asa rehetra, mafy ny feon'ny antso, maheno tsara ny mpiara-miasa rehefa miantso ianao. Ny bateria dia ampy ho an'ity famantaranandro ity. Izaho dia mandrisika. Ahoana no haseho amin'ny hoavy-fotoana.
Ny famantaranandro super dia mitazona 4-5 andro